Kuthetha ntoni ukuphupha iChampagne? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kwindawo yokuqala, ukuphupha i-champagne ayibonisi itheko, kodwa ngamanye amanqaku okuhlalutya. Akusoloko kungcono ukufuna ukubhiyozela, kuba ubomi kufuneka bulungelelaniswe kwaye ngaphandle kokugqitha okuninzi.
Ngokuqinisekileyo ngamanye amaxesha kuyimfuneko ukukhangela enye indlela kwaye, ngelishwa, ungabalekela kwinto esele isaziwa. Kuwo onke la manqaku, kungcono ukuba uwuphephe ummandla wentuthuzelo, kuba uyingozi.
Isicatshulwa sinesindululo sokubonisa ngakumbi malunga nazo zonke iintsingiselo ezinxulumene nephupha le-champagne. Ke amathuba okwazi into ekufuneka yenziwe kwaye inokusebenza ngendlela enomdla ngakumbi.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha i-champagne?
2 Iphupha le-champagne kwiglasi
3 Iphupha malunga ne-White Champagne
4 Iphupha le-champagne evaliweyo
5 Ukuphupha kwe-champagne echithakeleyo
6 Ukuphupha usela i-champagne
7 Iphupha lokuhlamba i-champagne
8 Ukuphupha ngokwaphula i-champagne
9 Iphupha le-champagne notella
10 Iphupha malunga nokuvula iBhotile yeChampagne
11 Ukuphupha umntu osela i-champagne
12 Ukuphupha umntu odlala ne-champagne
13 Iphupha malunga neChampagne ebomvu
14 Iphupha malunga neChampagne Toast
15 Ngaba intsingiselo ilungile okanye ayilunganga?
Kuthetha ukuthini ukuphupha i-champagne?
Ubomi bunokuphuculwa kwaye buxhomekeke kuphela kulowo nalowo, kodwa bunokuba ngendlela engaqhelekanga. Soloko ulungele le nyaniso kwaye ungakhalazi, kuba iphupha elo lithetha ukuba kufuneka ulungelelanise.
Ukuphupha i-champagne sisimemo nje sokuba ujonge ngaphakathi kuwe kwaye ufune ezona ndlela zilungileyo. Ukusukela ngoko ayisiyonto inzima, yisebenzise nje kwaye utyekelo lwendalo luya kusebenza ngcono kwaye lungcono.
Ukwazi ngakumbi ngazo zonke iintsingiselo kulula kwaye eyona nto iphambili kukukhumbula zonke iinkcukacha. Kwelinye icala, ilingana nje neemeko ezininzi kwaye ke ungcono ujonge ukuba ziyintoni na.
Iphupha le-champagne kwiglasi
Ayinamsebenzi into yokuba izinto azihambi ngokwesicwangciso, inyani kukuba kuhlala kukho into yokufunda.
Zama ukucinga ngayo kwaye utyekelo lwendalo luya kuba kukuhlala uhamba kwicala elifanelekileyo kakhulu.
Iphupha malunga ne-White Champagne
Ngamafutshane, uxolo lukukukhokela kwaye kufuneka ufune ukuphiliswa kwawo onke amanqaku abalulekileyo.
Nangona kunjalo, ukuqhubeka nokukhetha ngokufanayo akunakwenza nto kwaye umzuzu ufuna utshintsho.
Iphupha le-champagne evaliweyo
Uninzi lweendlela ezivaliweyo zibonisa imeko ekhethekileyo: izimo zengqondo zazo azivuli.
Ukwazi oku, eyona nto intle ukuyenza kukuzigxeka nokuphupha nge-champagne evaliweyo kubonisa le nyani.
Ukuphupha kwe-champagne echithakeleyo
Eyona nto inomdla ebomini uhlala uphepha inkunkuma kwaye le nyaniso ibandakanya amanqaku amaninzi afuna ukhathalelo.
Konke malunga namandla, amandla akho kunye nexesha, ke soloko ujonga iindlela ezahlukeneyo.
Ukuphupha usela i-champagne
Njengomgaqo ngokubanzi, imeko yangoku ifuna wonke umntu ukuba alumke kancinci kwinto acinga ngayo.
Phambi kokuba usebenze, kufanelekile ukwazi ukuba ingcinga yenzekile kwaye kubalulekile ukuzama ukucinga izinto ezingcono.
Iphupha lokuhlamba i-champagne
Le yenye yeempawu ezimbi kwaye ibonisa ukuba ubomi buzama yonke into ukukubonisa indlela ohamba ngayo.
Yazi oku kwaye ungonwabela zonke izibonelelo ezinkqonkqozayo emnyango.
Ukuphupha ngokwaphula i-champagne
Iimpazamo ziyenzeka kwaye ziyinxalenye yokufunda, kodwa ubomi bufuna ukuba iimpazamo ezifanayo ziphephe ukwenziwa kwakhona.
Into ephambili kukuba izisa iingenelo kubo bonke kwaye ixesha langoku lifuna ukuba ukhathalelo lwenziwe kuwo onke amanqaku.
Iphupha le-champagne notella
Ngokuqinisekileyo akusoloko kunokwenzeka ukuqonda zonke iimeko ezikungqongileyo, kodwa kuya kufuneka uzame.
Indlela efanelekileyo kakhulu, ke ngoko, ekufuneka ilandelwe kukusoloko ujonga kwindawo engqongileyo kunye nento engekhoyo.
Iphupha malunga nokuvula iBhotile yeChampagne
Ixesha elizayo licela inyathelo kwaye eyona nto ibalulekileyo ukuze uyiqonde kukujonga ngakumbi kwixa elidlulileyo, ukunqanda ukwenza iimpazamo ezifanayo.
Abo banesakhono, baya kuba nethuba kunye nethuba lokufezekisa iinjongo.
Ukuphupha umntu osela i-champagne
Amaxesha amnandi afuna izimo zengqondo ezifanelekileyo kunye notshintsho lwenyani lube ngcono, kodwa ke lumka.
Landela iinkolelo zakho ngokuqinileyo kwaye uyazi ukuba ukuphupha i-champagne kule meko kubonisa ukuzingisa okufunwayo.
Ukuphupha umntu odlala ne-champagne
Ngamafutshane, i-omen ilungile kwaye ibonisa ukuba amaxesha amnandi aya kwenzeka ngoku ebomini bakho.
Ekuqaleni, lixesha lokuvavanya ulwazi kunye nokwenza yonke into isebenze ngcono.
Iphupha malunga neChampagne ebomvu
Owona mqondiso uqhelekileyo unxulunyaniswe nenyaniso enomdla: isini sakho sifuna ingqalelo ethe kratya.
Khumbula ukuthetha neqabane lakho kwaye ukuba awunayo, zama ukuyinika ukuhamba nangapha kwaye wonwabe.
Iphupha malunga neChampagne Toast
Amaxesha amnandi aseza kuza, kodwa kufuneka silumke kakhulu kwaye siqale ukuxabisa abantu ngakumbi nangakumbi.
Kuphephe ukusoloko ufuna ukuhlala wedwa okanye ucinga ngezinto ezingaphezulu, kuba azifanelekanga.
Ngaba intsingiselo ilungile okanye ayilunganga?
Ngalo lonke ixesha lungiselela amaxesha amnandi namabi kwaye ujonge ngaphakathi kuwe, kuba unokuhlala uphucula.
Ukuphupha i-champagne luphawu oluqinileyo lokuba iimpazamo zinokulungiswa kwaye kufuneka zenziwe ukusukela ngoku.
Inkolo yamaSilamsi-Yazi yonke into malunga nale Nkolo